Nofoanan'i Suède ny fameperana ny dia amin'ny firenena eropeana 4
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Suède » Nofoanan'i Suède ny fameperana ny dia amin'ny firenena eropeana 4
Nanambara ny tompon'andraikitra soedoà fa hanafoana ny toro-hevitra momba ny dia ho an'ny olom-pireneny ny governemanta soeda tsy handehanana any amin'ny fanjakana eropeana 4, manomboka rahampitso. Nilaza ireo tompon'andraikitra fa ny fanapahan-kevitra handrava fameperana dia natao tao anatin'ny famantarana izany Covid-19 latsaka ny aretina.
Nilaza i Stockholm fa hampitsahatra ny torohevitra momba ny fitsangatsanganana tsy ilaina any amin'ireo mpifanila vodirindrina Norvezy sy Danemarka, ary koa any Suisse sy ny Repoblika Czech
Ny fetra fitsangatsanganana ankehitriny ho an'ny firenena hafa ao amin'ny Vondrona Eropeana sy ny Fanjakana Mitambatra dia hijanona hatramin'ny 12 Aogositra.
Nanapa-kevitra ny hiala amin'ny fanidiana mafy i Suède ary hitazona ny ankamaroan'ny sekoly sy orinasa hisokatra mandritra ny valanaretina coronavirus, tetikady iray nampiavaka azy tamin'ny ankamaroan'ny Eropa.
Hevitra voalohany momba ny Keto: Vakio momba ny tank shark nomerao voalohany
WTTC: Ny governemanta dia tsy maintsy mametraka fotodrafitrasa fitiliana feno amin'ny seranam-piaramanidina